किन आउँछ हाच्छ्युँ ? यस्ता छन् कारण « Himal Post | Online News Revolution
किन आउँछ हाच्छ्युँ ? यस्ता छन् कारण
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ आश्विन १६:०७
असोज २२,तपाईलाई थाहा छ ? हाच्छ्युँको गति सय माइल प्रतिघन्टा हुन्छ र यसका साथ करीब एक लाख कीटाणु बाहिर आउँछन् । निद्रामा हाच्छ्युँ आउँदैन किनकि सुत्दाखेरी हाच्छ्युँ गराउने नसाहरू आराम गरिरहेका हुन्छन् । यो एक एक शारीरिक प्रक्रिया हो । यसलाई दुवै राम्रो र नराम्रो संकेतका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । गलत समयमा हाच्छ्युँ गर्दा अशुभ हुन्छ भनेर कोहीकोही रोक्न खोज्छन् । तर यसो गर्नु गलत हो । हाच्छ्युँ रोक्दा शरीरलाई नोक्सानी हुन्छ । आखिर किन आउछ हाच्छ्युँ ?
हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताकै एक अंग हो हाच्छ्युँ । फोक्सोबाट हावा नाक र मुखको बाटो हुँदै तीव्र गतिमा बाहिर आउँछ । नाकमा बाहिरी कण घुस्दा नाकको झिल्ली चिलाउँछ वा फुल्छ । यसो हुँदा नाकले यो सन्देश मस्तिष्कसम्म लग्छ र मस्तिष्कले नै कणलाई शरीरबाहिर मांसपेशीहरूलाई हटाउन आदेश दिन्छ । हाच्छ्युँको माध्यमले यस्ता हानिकारक कणलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्छ ।
हाच्छ्युँ गर्दा शरीरका पेट, छाती, डायाफ्राम, गला र आँखाहरू सक्रिय हुन्छन् । यिनीहरूको संयुक्त प्रयासले अवाञ्छित कणलाई शरीरबाहिर निकाल्छन् । शुभ वा अशुभको पछि लागेर हाच्छ्युँ रोक्न खोज्दा घातक परिणाम हुन्छ । यसरी रोक्न खोज्दा बाहिर निस्कनुपर्ने हावा अन्य अंगतिर मोडिन्छ । सबभन्दा बढी हानि कानको जालीलाई पुग्छ । आँखा र गर्दनमा पनि नकारात्मक असर पुग्छ । लगातार यसो गर्दा हृदयघात र दिमागमा क्षतिसम्म हुनसक्छ ।
छिटो तौल घटाउने महिलाको, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या, धेरै अंगले काम गर्न छोडे
एजेन्सी- एक वर्षमा ४० किलो तौल घटाएपछि चीनकी एक ३० वर्षीया महिला पछिल्लो समयमा चर्चामा
अध्ययन भन्छ: पुरुषको भन्दा महिलाको दिमाग धेरै गुणा सक्रिय हुन्छ
एजेन्सी- महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा धेरै सक्रिय हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । विशेषगरी ध्यान
यस्ता सजावटका सामाग्री भुलेर पनि घरमा नराखौँ, जसले सत्यानास बनाउन सक्छन्
हामीले घरमा विभिन्नखालका बस्तुहरू राखेका हुन्छौँ । कुनै बस्तु सजावटका लागि त केही बस्तु सौखका
पत्रकारिता हुँदै होटेल व्यवसायमा उदाएका नवराज : ५ करोड लगानीमा १५ जनालाई रोजगार
उदाउँदो औद्योगिक केन्द्र बनेको सुन्दर नगरी बुटवलबाट पश्चिम जाँदै गर्दा १२ किलोमिटरको दूरीमा ‘होटेल द